३० काटेसी यस्तो खानपान विष समान | सुदुरपश्चिम खबर
३० काटेसी यस्तो खानपान विष समान
उमेर ढल्कदै गएपछि खानपान र स्वास्थ्यमा खास ध्यान दिनैपर्छ । भनिन्छ नि, किशोरवयमा ढुंगा पनि पचाउन सकिन्छ ।
तर, जति जति उमेर ढल्कदै जान्छ, उत्तिनै हाम्रो शरीरको कार्य क्षमता कमजोर जान्छ । पाचन यन्त्र पनि उस्तै रहँदैन । खासगरी ३० बर्ष पार गरेपछि हामीले आफ्नो शारीरिक क्षमता गुमाउँदै जान्छौं । हुन त यो सबैको हकमा लागु हुँदैन । कतिपयको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता एवं शारीरिक अंगको कार्यक्षमता उमेर ढल्कदै जाँदा पनि उत्तिकै बलियो र तन्दुरुस्त हुनेगर्छ ।
यद्यपी धेरैजसोमा भने ३० बर्ष उमेर पुरा गरेपछि शरीर कमजोर हुन थाल्छ । यो त्यही उमेर हो जहाँ हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन थाल्छ । पहिले पहिले सजिलै घट्ने ज्यान अब शरीरमै थेग्रिन थाल्छ । धेरैले वृद्धवृद्धाको रोग भनेर चिन्ने ओस्टियोपोरोसिस रोग पनि यही उमेरमा सुरु हुन थाल्छ ।
त्यतिमात्र हैन, यो त्यही उमेर हो, जसमा मानिसहरुको ध्यान बच्चा जन्माउनेतिर केन्द्रित हुन थाल्छ । किनकी यस उमेर पश्चात्त महिलाहरुको प्रजनन क्षमता समेत परिवर्तित हुन थाल्छ ।
किनकी सही तथा पोषणयुक्त खानेकुराको सेवनले एजिङ्ग प्रक्रियालाई सुस्त बनाउन सकिन्छ । त्यसो भए यस्ता कुन कुन खानेकुरा छ जसले मानिसमा छिट्टै बुढ्यौली निम्त्याउँछ ?
कृतिम गुलियोको सम्बन्ध क्यान्सरसित हुन्छ । यसको सेवनले शरीरमा ग्लूकोजको मात्रा बढाउनुका साथै बोसो धेरै लाग्छ । यसकै कारण टाइप –२ मधुमेह, कार्डियोभास्कुल रोग निम्तिने गर्छ ।
मदिरालाई क्यालोरीको भारी पनि भनिन्छ । किनकी शरीरले तीस वर्षको उमेर पछि क्यालोरी बर्न गर्न सक्दैछ, त्यस्ता क्यालोरी पेटमा जम्मा हुन थाल्छ । यसले शरीरमा इन्सुलिनको स्तर समेत बढाउँछ, जसले विभिन्न रोगको समस्या निम्त्याउँछ । मदिराले हामीलाई झक्झक्याउने पनि गर्छ । यद्यपी, भोली विहान हुन पाएको छैन, हामीलाई मदिराको तलतल लाग्न थाल्छ ।
त्यसपछि हामी कफी माग्न थाल्छौ । तर के तपाईंलाई लाग्छ, कफी चाहीँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो ?
पुरुषहरुमा ट्रान्सफ्याटले प्रजनन प्रक्रियालाई सुस्त बनाउने गर्छ । यसले हर्मोनलाई असन्तुलित बनाई स्मरण शक्ति तथा मस्तिकको गतिविधिलाई सुस्त बनाउने गर्छ ।
त्यसैले, ट्रान्सफ्याट छोड्नुस, बटर खानतिर लाग्नुहोस् । यसको सेवनल मस्तिष्क तथा जोर्नीले पनि तपाईलाई धन्यवाद भन्ने छन् ।
कफी बनाउन प्रयोग गरिने क्रिमर सजिलो पनि हुन्छ, छिटो पनि । तर कफी क्रिमरको प्रयोग स्वास्थ्यका लागि हानीकारक मानिन्छ । किनकी यसमा प्रयोग हुने सेतो कलर टाइट्यानियम डाइअक्साइडबाट बनाइन्छ । टाइट्यानियम डाइअक्साइड विशेषगरी सन्सक्रिममा पाइन्छ । जसले कलोजोलाई खराब बनाउनुका साथै कोशिकामा क्षति पु¥याउँछ ।
त्यसबाहेक, क्रिमर ट्रान्स फ्याट प्रयोग गरेर बनाइन्छ । ट्रान्स फ्याटले मुटुको धमनीलाई कडा बनाउँछ । यसले जोर्नी, मस्तिष्कको गतिविधि तथा हर्मोनलाई समेत असर गर्छ । त्यसैले, कफी नै सेवन गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि क्रिमर विनाको कफी सेवन गर्ने बानी बसाल्नुहोस् ।
यसको लागि अत्याधिक मात्रामा चिनी, नुन, मैदा,मदिरा, लगायतका खानेकुरालाई नियमित खानपानबाट कटौती गर्नुपर्छ । र, शरीरलाई मजबुत बनाउनु पर्छ । याद राख्नुस्, सजिलै उपलब्ध हुने खानेकुरा मात्र शरीरका लागि सबैथोक हैन । यसमा पौष्टिक तत्व पनि जरुरी हुन्छ । अझ तीस वर्ष उमेर पार गरेका मानिसहरुलाई त झन् यो यस्ता खानेकुरा सबैथोक हुँदै होइन । किनकी यसले स्वास्थ्यलाई जोखिममा त पार्छ नै, शरीरमा भएका राम्रो तत्वलाई नष्ट गरेर शरीरलाई अझै रोगको भारी थप्ने गर्छ । अनलाइनखबर बाट सभार